Ndeipi yakatemerwa chikwereti kambani? | Ehupfumi Zvemari
Ndeipi yakatemerwa chikwereti kambani?
Susana Maria Urbano Mateos | | Mutemo wezvemari
Iyo inozivikanwawo se "SRL" uye inozivikanwa se "SL" kana Yakatemerwa Kambani. Iyo ndeimwe yemhando dzemakambani mukati meiyo nzvimbo yekutengesa, inoshandiswa zvakanyanya muSpain nevanozvishandira vezvemabhizimusi uye vanozvidaidza kuti "vezvemabhizimusi".
Izvi zvinobvumidza mitezo yeiyi mhando yekambani, ganhurira chikwereti chako kuguta rakapihwa kukambani. Nekudaro, inzira inoshanda yekudzivirira yako wega zvinhu, sechikamu chengozi inogona kuitika yechikwereti kune iro bhizinesi nenzanga iri kutaurwa.
1 Ndeipi yega proprietorship yakatemerwa chikwereti kambani?
2 Hunhu hweyega proprietorship yakatemerwa chikwereti kambani
2.1 Mimwe yeakanyanya hunhu hwekambani yega proprietorship yakatemerwa chikwereti kambani
2.2 Zvimwe zvinhu zvakawedzerwa kune iyo SL
3 Chii chinonzi wega proprietorship limited kambani?
3.1 Misiyano iyo ine-munhu-ane chikwereti chakaringana kambani "SRLU" ine nekambani ine chikwereti kambani "SRL"
3.2 Mamwe matipi paSL kana anozvishandira
Ndeipi yega proprietorship yakatemerwa chikwereti kambani?
Kana zvasvika pakusarudza kwekambani, ndiyo yega proprietorship yakatemerwa chikwereti kambani. Imwe yei kunyanya kusarudzwa nevatengesi kuti mumatanho avo ekutanga mumusika vanofarira kunyoresa vanozvishandira uye nekudaro vanokwanisa kushanda vega.
Este mhando yekambani Iyo inosarudzwa neavo vanamuzvinabhizimusi avo vanoshuvira kuve mumwe muzvinabhizimusi uye nenzira imwecheteyo kupinda mubhizimusi neindasitiri ine chikwereti chakaganhurirwa icho chavanoona pfuma yavo.
Unogona kupihwa zviitiko zviviri zvakasiyana zvekwako wega proprietorship ane mashoma emakambani emakambani
Imwe yacho yakaumbwa ne shamwari yakasarudzika, Ini ndatoziva kuti uyu chete mudiwa munhu zviri pamutemo kana munhu wenyama.
Mhosva yechipiri yakasarudzika yeiyo yega proprietorship yakatemerwa chikwereti kambani ine nzanga inoumbwa nevaviri kana vanopfuura vadyidzani. Izvi zvakapa kuti zvikamu zvese zvakatamisirwa uye zvigova zvivakwa zvemumwe mudiwa.
Hunhu hweyega proprietorship yakatemerwa chikwereti kambani
Kunyangwe pavanenge varipo mhando dzakawanda dzemakambani ekutengesa kuburikidza neayo munhu anogona kutanga kuvaka bhizinesi ravo.
Ndiyo yega proprietorship yakatemerwa chikwereti kambani, izvo inopa zvakakosha uye zvakanakira yeavo vanozvishandira uye yakasarudzika mhando yemabhizimusi.
Iyi yekutengesa kambani inonyanya kuzivikanwa nekuva nemumwe chete, kuve iye mudiwa uyo ane masimba ekutonga mukati mekambani kuitarisira kana kuendesa manejimendi kungave kuboka revanhu kana kune mumwe munhu.
Chimwe chinhu chakakosha cherudzi urwu rwevanhu chete proprietorship yakatemerwa chikwereti, ndizvo zvakangofanana nedzimwe nzanga. Iyo capital inopihwa ishoma kungofanana nezvikwereti zvavo nezvikwereti zveruzhinji, asi munharaunda ye rrakatemerwa wega mutoro, iyo capital stock yakakamurwa kuita zvakaenzana uye zvisingaenzanisike zvikamu.
Mimwe yeakanyanya hunhu hwekambani yega proprietorship yakatemerwa chikwereti kambani
Bumbiro nechibvumirano chekambani zvinofanirwa kunyatso sarudza sangano yehutungamiri. Kuve kungochinjwa chete kana mirau ichipa shanduko dzakadai.
Kuti umise imwe-yemunhu yakashomeka mutoro kambani, iwe unoda hushoma hwemunhu 1 chaiye. Kuve vanhu vazhinji vanosanganisirwa, iyo kambani kuve inongogumira mutoro kana LLC.
Inofanira kuva kunyoresa uye kurekodha zvakanyorwa kuMercantile Registry, chero shanduko mune wega mudiwa, pamwe neshanduko mune yega proprietorship yekambani ine mutoro kambani.
Inofanira kunyoreswa muMercantile Registry, iyo-yemunhu-akakwenenzverwa kuita mutero kambani iyo inogadzirwawo neruzhinji gwaro uye iyo ichave iine madhiri ekambani.
Shall tumira mukati memwedzi miviri kuMercantile Registry gwaro rekubatanidzwa kwekambani yemercantile, iyo nguva inotanga kuverenga kubva pazuva rakapihwa zvinyorwa zvekambani zvekubatanidzwa. Kuve ivo vavambi uye manejimendi avo vanozopindura pamwe uye zvakasarudzika pakukanganisa, kukuvara uye kufungira izvo izvo zvinokonzereswa nekutyora chisungo chekunyoreswa muMercantile Registry.
Zvimwe zvinhu zvakawedzerwa kune iyo SL
Kana paine chinodikanwa chekunyoresa sekambani-inhengo-inemisoro yemitero kambani mukati memwedzi mitanhatu pamberi peMercantile Registry, mudiwa achapindura zvisina muganho uye pamwe chete kuzvikwereti zvemagariro kuti yakabvumirana, panguva iyi iyo kambani yakapasa isina kunyoreswa neMercantile Registry.
La nzanga inogona kutanga zviitiko zvekutengesa pazuva rekupihwa kwezvinyorwa zvekubatanidzwa, kwete zvisati zvaitika.
Kunze kwekunge zvakapihwa neimwe nzira mumitemo, iyo yega proprietorship yakatemerwa chikwereti kambani ichave nenguva isingaperi.
Kuva 3.000 maEuro iwo mashoma ekutanga capital kumisikidza munhu-munhu anezvikwereti zvine chekuita nekambani. Guta guru richakamurwa kuita zvikamu zvakaenzana uye zvisingaenzanisike, izvo zvisingakwanise kutorwa sezvikamu kana chero zita rinotaurika. Iyo yemagariro capital yakapihwa inofanirwa kubhadharwa zvizere kuti utore chikamu mukambani kuti ikudzwe.
Mukati memupiro wezvemagariro hupfumi unogona kuva kupa kodzero dzakakosha kana zvinhu uye izvi zvinotorwa sechikamu cheupfumi chakaenzana.
Pasina mamiriro ezvinhu uye hapana mamiriro ezvinhu avanogona kuverengerwa se mipiro yekugovana capital, iwo mabasa kana masevhisi.
Kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira kana kutaurwa, zvese Mupiro kumatura emari unozoonekwa uchigadzirwa nemusoro wepfuma.
Aya maitiro anojekesa sarudzo yemushambadzi uyo anoda kumhanyisa rake bhizinesi, ari bhizinesi nhamba. Kushandisa imwe huwandu hwehunhu hwevanhu uye vane zvido zvavo zvisina kugutsikana nekuzvisimbisa sekambani inezvikwereti.
Chii chinonzi wega proprietorship limited kambani?
Nezve bumbiro remunhu oga proprietorship, zvakanakira, zvimwe zvepuraimari, zvinofanirwa kutariswa, senge kuti zvingave nyore sei kunyoresa neMercantile Registry, semunhu anozvishandira muzvinabhizimusi zvichipesana nekuda kutanga kambani inezvikwereti.
Chimwe chikamu chevZvakanakira kubatanidza seye yega proprietorship yakatemerwa chikwereti kambani, ndiko kureruka uko masangano ezvemari anogona kutipa mari yekutangisa mashandiro ekambani iyi.
Para gadzira yega proprietorship yakatemerwa chikwereti kambani chitupa che "Sangano remagariro" izvi zvakapihwa neCentral Mercantile Registry.
Kutaura Chitupa chinoshanda kana chine hupenyu hwesherufu hwemwedzi mitatu, Kuve iyo nguva iyo izvi zvinoshanda uye zviri kunzwisiswa kuti mushure memwedzi mitatu imwechete chitupa chinogona kuvandudzwa kuti chishande kwemimwe mwedzi mitatu, zvisinei, hazvikurudzirwe kurega chitupa chapera kana kupera.
Kubva pane ichi chitupa chakapihwa neCentral Mercantile Registry, kopi inofanira kusunganidzwa kana uchizadza iyo YEMAHARA.
Ipapo mupiro wehupfumi hwemagariro unofanirwa kuitwa, ingave mari kana isiri yemari mipiro.
Mipiro yemari ndevaya vane mari inongova yemari chete uye imari yemubhadharo yemumwe nemumwe, kana iri mari isiri yemari, izvi zvinogona kunge zviri zvemari ine kukosha kwakatsanangurwa uye kwakatarwa.
Panyaya yeumwe chete proprietorship yakatemerwa chikwereti kambani, Iwe unofanirwa kubhadhara Mutero paPrimrimial Shanduko muHaimari uye ndokumbirawo iyo CIF, mukuwedzera kune zvimwe zvitupa.
Misiyano iyo ine-munhu-ane chikwereti chakaringana kambani "SRLU" ine nekambani ine chikwereti kambani "SRL"
Ngatitangei nemisiyano iripo pakati penzanga ye yega proprietorship yakatemerwa chikwereti "SLU" uye mushandi anozvishandira.
Ose akaumbwa zvakasiyana uye anobhadhara mutero zvakasiyana. Zvichakadaro iye anozvishandira mushandi anobhadhariswa mutero kuburikidza neako wega mutero wemitero kana "Yemunhu Mari Yemutero", iyo nenzira ine mwero wezita we19,5% - 47%.
Iyo Sole-Kugovana Yakatemerwa Dhizaina Kambani "SLU", yakabhadharwa nemutero wekambaniSezvo iyi mitero yakadzikira kare kubva kumakambani madiki-anobhadhara asingasviki 15% kana seyakanyanya makambani e25%, izvi chete muna2016.
Mukati memisiyano yekuverenga, mutsauko mumwechete unobatsira wekambani haugoneke, kuve mushandi akazvishandira akanyoresa anozadzisa zvisungo zvishoma pane kambani, izvi nekuda kwezvikonzero zviri pachena.
Ndichiri Munhu anozvishandira anofanirwa kuendesa bhuku reakaundi rinomiririra uye rinoratidza kupinda uye kubuda kwemari, iyo inogona kuverengerwa sebasa rakareruka riri kuitiswa nemunhu mumwe chete, kune rimwe divi, iyo-yemunhu-yakatemerwa mutoro kambani inofanirwa kutakura ma accounting zvinhu sezvinoita marudzi ese emakambani ezvokutengeserana, achifanira kuunza account account inonamira kune yakajairwa accounting account.
Mamwe matipi paSL kana anozvishandira
Iko kuderera kuno kune vanozvishandira ndiko kugona kwake kuita ino nguva uye nekudzora ruzivo kuti aite ake accounting account.
Vamwe ve mabasa emakambani anozvishandira uye ekutengesa Yakanyatsosiyaniswa uye inomiririra yekufarira kukuru pakuumba kambani, ibasa rekusabhadhara kana kusabhadharwa zvikwereti nekambani.
Kuva mushandi anozvishandira, zvikwereti zvinowira pazvinhu zvakananga zvemhuri zvemunhu mubvunzo wekusabhadhara, nepo, uri kambani inezvikwereti zvishoma, Zviri mukutadza kutevedzera muripo, chete zvinhu izvo zvakagadzirwa nekambani yemabhizimisi ndizvo zvinogona kuiswa munjodzi, midziyo yakadaro kwete mipiro inopihwa panguva yebumbiro senzanga yemutengesi pamberi peCentral Mercantile Regime.
Muchidimbu iyo munhu anozvishandira ari panjodzi yekurasikirwa nezvinhu zvake uye zvese izvo kambani yekutengesa inazvo inomhanyisa njodzi yekurasikirwa neinvestment yakapihwa kune hombe stock.
Mukati mevzvakanakira nekuipira izvo zvinogona kuvapo pakati pekuve mushandi akazvishandira kana kuve iri shoma kambani chikwereti, pamwe nezvakanakira kuve izvo SME inopa.
Zvinokurudzirwa kutanga semushandi anozvishandira, kuitira kuti uwane kugadzikana mumusika uye kufambira mberi kana kushuvira kuve inosanganisirwa yekutengeserana kambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvematongerwo enyika » Mutemo wezvemari » Ndeipi yakatemerwa chikwereti kambani?
Stock stock: chii chinonzi BPA?